Yemen: Rayid ku sugnaa magaalada Hodeida oo duqeymo lagu laayay - BBC News Somali
Yemen: Rayid ku sugnaa magaalada Hodeida oo duqeymo lagu laayay
Isbitaalada magaalada Hodeida ayaa waxa ay codsanayaan deeq dhiig oo deg-deg ah. Hay'adda caalamiga ah ee Bisha Cas ayaa sheegtay in ay isbtilaalada u direeyso qalabka qalniinka si loo daweeyo 50 qof oo dhaawac culus ka soo gaartay duqeynta.
Hay'adaha deeqbiyeyaasha ayaa ka digay in khash-khaad kasta oo ka dhaca magaalada dekedda ah ee Hodeida uu nolosha malaayin qof oo reer yemen ah cariiri galinayo.
Daglaaka ayaa bilowday sanadkii 2014-kii markii mucaaradka xutiyiinta ay ka faa'iidaysteen daciifnimada madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi. Waxa ayna la wareegeen maamulka gobolka saada iyo deegaanada ku deedsan. Kadibna waxa ay ku siqeen oo weerareen magaalada sanca, kaasi oo Mr Hadi ku qasbay in uu wadanka ka baxo.
Yemen: Rayid badan oo ka qaxaya Xudayda
Dab ka kacay dekadda Xudeyda ee dalka Yemen oo baabi'iyay raashin badan oo gargaar ah